Fursada ay Chelsea ugu tartami karto Premier League, xiddiga uu kaga daydo kubadda cagta & dhowr arrimood kale uu ka hadlay Hakim Ziyech – Gool FM
“Horyaalka Premier League wuxuu ka sii baxayaa gacmaha Liverpool.” – Jamie Carragher
Koeman oo dhaleeceeyay shaqsiyadda ciyaartoyda Barcelona kaddib guushii ay ka gaareen kooxda Cornella
Manchester United oo heli karta adeega xiddig muhiim ah ee ka tirsan kooxda Juventus
Muxuu ka yiri Jurgen Klopp guuldarradii kooxdiisa Liverpool ay kala kulantay Burnley??
Burnley oo jabisay rikoorkii garoonka Anfield, kaddib markii ay saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Liverpool… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Liverpool iyo Burnley ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha kooxdiisa Barcelona uga qeyb galaya kulanka UD Cornella
Weeraryahan ka soo ciyaaray Premier League oo kashifay tababaraha ay Chelsea wada hadallada la billawday si ay ugu baddesho Frank Lampard
Kaddib Dani Ceballos, Arsenal oo ku dhow inay la soo wareegto ciyaaryahan kale ee ka tirsan kooxda Real Madrid
Sidee ayuu Cristiano Ronaldo uga falceliyay koobkii Super Cup-ka Taliyaaniga oo ay ku guuleysatay Juventus??
Fursada ay Chelsea ugu tartami karto Premier League, xiddiga uu kaga daydo kubadda cagta & dhowr arrimood kale uu ka hadlay Hakim Ziyech
Dajiye December 1, 2020
(London) 01 Dis 2021. Xiddiga reer Morocco iyo kooxda Chelsea ee Hakim Ziyech, ayaa wuxuu ka hadlay fursadaha kooxdiisa ay ugu tartami karto hanashada horyaalka Premier League.
Wargeyska “Telegraph” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Xiddiga reer Morocco ee Hakim Ziyech, wuxuuna yiri:
“Ku guuleysiga Chelsea ee horyaalka Premier League? Dabcan, marwalba waa inaad aamintaa arintaan.”
“Ku guuleysiga waxay ka bilaabantaa aaminaad, kaddibna inaad si adag maalin walba u shaqeyso si aad u gaarto, waxaan u maleynayaa in taasi ay tahay waxa aan hadda sameysneyno, dhamaadka xilli ciyaareedka, waxaan arki doonaa natiijada waxa aan sameyno.”
Intaas kaddib Hakim Ziyech ayaa wuxuu ka hadlay isbarbardhiga isaga iyo Eden Hazard, wuxuuna yiri:
“Eden Hazard waa xiddig heer caalami ah, wuxuu ii yahay tusaale aniga ahaan, waxaan arkaa sida uu u ciyaaro kulamada, waxaana daawadaa faahfaahinta yar ee uu sameeyo, wax badana waan ka baran karaa isaga.”
“Waan ku faraxsanahay Chelsea, waxaana dareemayaa wanaag, iyo in aan joogo gurigayga, waana tan ugu muhiimsan marka aad ciyaarayso.”
Halyeeyga Marco van Basten oo sheegay halka ay daciif ka tahay kooxda Liverpool
Kooxda Real Madrid oo heshiis is-dhaafsi Xiddigo waa weyn ah u bandhigaysa Paris Saint-Germain